Mifandraisa aminay - Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd.
Mpanamboatra sy mpamatsy akanjo mafana mavitrika mandritra ny 10 taona mahery. Quanzhou OMI akanjo Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2008.OMI mipoitra haingana ho mpamorona akanjo fanatanjahan-tena sy mpanamboatra.
OMI dia miezaka mamolavola karazan'akanjo fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, vehivavy sy ankizy, miampy karazana vokatra fanaovana fanatanjahan-tena hafa. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana akanjo mafana, yogawear, fanatanjahan-tena, akanjo, leggings, bra fanaovana fanatanjahan-tena, T-shirt, sweatshirts, hoodies, palitao, short , sns.
Mpamatsy azo itokisana miaraka amin'ny taratasy fanamarinana BSCI & Oeko-Tex Standard 100, manondrana any amin'ny tsena eropeana sy amerikanina izahay, miaraka amin'ny kalitao sy ny vidin'ny fifaninanana.
0086- （0） 595-22412001